Gazety Ny Valosoa, 19 Septambra 2017. Miarinarivo, Ambatondrazaka, Faratsiho (Pesta), Cua, Rajao… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Pont de Vohiposa, 19 Septembre 2017. L’Union Européenne est déjà sur place.
Omavet, Iarivo 2017. Fandrosoana aminy mangarahara, tsy mila resaka maloto. →
Miarinarivo misy depiote mpamadika palitao
Namerina amin’ny laoniny ny TIM Ravalo
Tontosa soa aman-tsara ny faran’ny herinandro lasa teo ny fihaonana sy fankalazana ny faha- 15 taona ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), tany amin’ny distrikan’i Miarinarivo faritra Itasy; ka ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana mihintsy no nanatrika izany tany an-toerana. Vory lanona ireo mpikatroka , nandritra izany no nitondran’ireto farany ny hetahetany sy fanohanany tanteraka ny filoha Marc Ravalomanana amin’ny fifidianana ny taona 2018 . Ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana indray raha nandray fitenenana dia nazava ny hafatra napetrany ho an’ny rehetra . Mila manana fanetren-tena ny mpitarika indrindra ny ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara , mba ho modely eo anivon’ny fiaraha-monina .
Mahantra loatra ny Malagasy hoy ny filoha Marc Ravalomanana ka lasa manaiky izay manjo azy fotsiny , vonona aho hoy izy hanampy ny Malagasy mba hiala ao anatin’izao fahantrana izao . Taorian’ny kabary nifandimbiasana dia nisy ny fanapahana ny mofomamy ho fanamarihana ny faha- 15 taona ny antoko TIM. Ao amin’ity faritra Itasy ity, ao amin’ny distrikan’i Miarinarivo dia misy ny depiote TIM niofo ho HVM dia ny depiote Guillaume Ravahimanana, ka anisan’ny fototr’izao fankalazana ny faha-15 taona izao tany an-toerany koa ny famerenana amin’ny laoniny ny tanjaky ny antoko izay misy ity depiote mpamadika palitao ity.
Nitsidika tampoka ny Boriboritany faha-6
Nitsidika tampoka teny amin’ny Boriboritany faha- 6 Ambohimanarina omaly ny Mpanolotsaina manokan’ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra, ny Filoha Marc Ravalomanana
Nojereny tamin’izany ny trano famakiam-boky ao amin’ny Boriboritany faha- 6, izay ho havaozina sy homena fampitaovana toy ny Boky ary indrindra ny fametrahana INTERNET (Bibliothèque virtuel), ka nifampiresahana tamin’ireo mpiara- miombon’antoka.
Hojerena ihany koa ny olan’ny tantsaha mpamboly vary mahakasika ny rano, izay maina ny tanimbary na ny atsimo na ny avaratra ary hisy fiaraha- miasa amin-dry zareo Japone amin’ny fanatsarana ny fambolena vary eny Ambohimanarina sy ny manodidina. Ankoatra izany, nanolotra fanampiana manokana ireo zaza kamboty nilaozan’ny reniny izay nodimandry ny Filoha Ravalomanana, ka sady nampahery ireo mitaiza izy no nanolotra ny fanomezana. Nandray ny Filoha Marc Ravalomanana tamin’izao fitsidihana izao ny lefitra faharoan’ny delege, Andrianantoandro Sitraka, izay nisaotra noho izao fanampiana atao amin’ny Boriboritany faha 6 izao.
Nankasitraka ny Filoha Marc Ravalomanana ireo rehetra tafaresaka taminy indrindra ireo mpianatra izay sendra tao amin’ny trano famakiam-boky ary ireo nitaiza ny zaza kamboty .
Sambo Norbert no filohan’ny COM-TIM Manakambahiny Andrefana
Fahombiazana no azon’ny antoko T.I.M, nandritra ny fandalovan’ireo delegasionina notarihin’ny Filoha rezionaliny, Ramanontronarison Charles, tany Manakambahiny Andrefana ny faran’ny herinandro lasa teo. Tafatsangana nandritra izany ny birao kaominalin’ity antoko ity ka lany ho filoha itantana izany andriamatoa Sambo Norbert. Tonga avokoa ireo mpikatroka T.I.M rehetra efa tao hatramin’izay nampian’ireo vao niditra sy ireo resy lahatra fa hiara-dia amin’i Dada ka hanohana azy amin’ny fifidianana amin’io 2018 ho avy io. Efa napetrakay ny fanamby fa tsy maintsy tafatsangana amin’ity volana ity avokoa ny COMTIM ato anatin’ny distrikan’ Ambatondrazaka hoy ny filohan’ny REGTIM Ramanontronarison Charles sy ireo mpiaradia aminy ary dia io izy hitantsika rehetra io.
Efa resy lahatra rahateo ny vahoaka fa tsy misy afa- tsy Ravalomanana Marc ihany no afaka hamaha ny olana ara-toekarena izay mihitsoka lalina dia lalina amin’izao fotoana izao hoy izy ireo, hany ka tsy niandry nantsoina intsony fa avy dia niaraka nientana nanampy amin’izao hetsika fananganana ny fototry ny antoko T.I.M izao. Efa tafajoro ny any Ampitatsimo hoy izy ary eo andalana ny kaominina hafa ary fantatra fa efa mihetsiketsika ihany koa ny eny anivon’ny fokontany. Fantatra nandritra ny tafa nifanaovana tamin’ireo delegasionina rehetra izay mitety kaominina manangana ireo rantsamangaika ireo fa antsitra-po avokoa fa tsy nitady tambiny ny fanatanterahan’izy ireo izao adidy izao ary torak’izany ihany koa ireo rehetra izay tafiditra mandrafitra ireny birao natsangana ireny ary ny vahoaka any an-toerana mihitsy no nanolotra azy ireny fa tsy hoe notendrena avy any ambony na ihany koa olona napetrapetraka fotsiny.
Matanjaka ary ao anatin’ny heriny tanteraka ny T.I.M aty Alaotra amin’izao fotoana izao hoy andriamatoa Ralambomanana Jacky Liva izay isan’ny mpikatroka mafana fo eny anivon’ny antoko ary mbola nohamafisiny fa betsaka ireo efa niverina ireo mpikambana izay naka rivotra tany ivelany amin’izao fotoana izao.
Tsy mitsaha-miakatra ny vidim-bary
Raha toa ka 500 ariary ny kapoakan’ny vary fotsy ao an-tsenan’ Ambatondrazaka dia efa tafakatra hatrany amin’ny 550 ariary izany eny amin’ireo mpivarotra eny amin’ny fokontany. Isaky ny alahady hatrany no fotoana hampiakaran’ireo mpiantoka ny vidim-bary ao an-tsena ary tsy tafidina intsony izany avy eo. Nambaran’ny tantsaha fa isan’ny mampijaly ny mponina eny ambanivohitra ny vanim-potoana tahaka izao satria voatery tsy maintsy mivarotra vary akotry amin’ny vidiny mora izy ireo hampidiran-janaka eny an-tsekoly kanefa tsy arakarak’izay no zava-misy fa vao mainka hampiakaran’ireo mpiantoka ambony dia ambony ny kapoakam-barifotsy avy eo.
Raha toa ka mba milatsaka ny orana ato ho ato dia mety mba ho tsara ny vary an-jetra izay efa tokony hiakatra ato ho ato hoy ireo tantsaha ihany ahafahana mamaha ny olana ara-bary saingy raha ny mifanohitra amin’izay dia mety hisavoritaka tanteraka io vidim-barifotsy io. Hatreto aloha, miaina ao anatin’ny fahasahiranana lalina ny vahoaka aty Alaotra izay efa tsy takona hafenina intsony fa hita miharihary eny an-tsena.
Tsy mampitovy lenta ny asan-tserasera ny Filoha fa mbola misy halako bika tsy tiako tarehy
Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny lapam-panjakàna Iavoloha ny filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny faran’ny herinandro teo . Amin’ny ankapobeny dia resaka efa mahazatra ny sofina no heno tao ambavan’ny filoha nandritra ny fanazavana nataony sy tamin’ny fomba namaliany ny fanontanian’ny mpanao gazety fa tsy dia misy zava-baovao loatra , ny tsapa aza dia toa fanasana atidoha aza no betsaka. Hita taratra tao anatin’ny valan-dresaka nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ity fa tsy mahavaha olona eto amin’ny firenena ny mpitondra HVM , fanamboaramboarana ny sain’ny vahoaka sisa no ataon’izy ireo fa tsy misy azo antenaina intsony ao anatin’ity taona farany itondràny ny firenena ity . Vokatr’izany, ny mpampahalala vaovao sisa no eritreretin’ny filoha hampahafantatra ny zavatra vitany eto amin’ny firenena .
Mpanao gazety avy amin’ny onjampeo samy manana ny firehany no tonga teny Iavolona tamin’io fihaonana io , nanantena ny maro tao anatin’izany fa hisy fiovam-penitra mahery vaika eo amin’ny asa fanaovan-gazety , kanjo inona no teo? Tsy mampitovy lenta ny asan-tserasera ny filoha fa mbola misy halako bika tsy tiako tarehy ihany , ka ireo fahavalo politikany toy ny filoha Marc Ravalomanana dia tsy ahita mangirana amin’ny fanokafana ny onjampeony . Raha eo amin’ny sehatry ny politika indray, manamboamboatra resaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina raha nanontany mikasika ny antoko mpanohitra ny mpanao gazety namana amin’ny tokony hisian’ny fihaonana eo aminy sy ny antoko mpanohitra dia nanambara izy fa efa mihaona aminy an-tsokosoko ireo antoko milaza fa mpanohitra ireo .
Dia fampiesonana toy izany sisa no ataon’ny filohampirenena , fihaonana miseho masoandro no ilaina fa tsy izay tsy hita maso tsy misy mpahita any , ahoana koa no hanamarinana izany ? Izany no ilazana eto fa tsy manana vahaolana matotra hitantanana ny firenena intsony ity fitondràna HVM ity fa fanamboaramboarana saina sy fampiesonana vahoaka sisa no vahaolana hitany mba hipetrahany eo amin’ny fitondràna indray . Raha mipetraka eo amin’ny maha ray aman-dreny azy ny filoha nandritra io fiaraha-misakafo maraina efa misandratr’andro tamin’ny mpanao gazety io dia hafa mihintsy ny adihevitra nipetraka tamin’izany .
Amin’ny manaraka Andriamatoa filoha, aleo mba zavatra hafa ahitàna taratra fa filohan’ny Malagasy 22 tapitrisa ianao no ho tsapan’ny vahoaka mandritra ny fihaonana toy ireny fa tsy hevitra mandeha ila sy kabary tsy valiana hatrany .
Nanao pi-maso tamin’ny mpanao gazety
Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny sabotsy antoandro lasa teo. Naharitra ora 3 teo izany fihaonana izany, niresahana ny fiainam-pirenena tamin’ny ankapobeny : teo amin’ny lafiny politika, toekarena, ary sosialy ; satria dia nifantoka tamin’izay ny fanontanian’ireo mpanao gazety tonga niatrika ny fotoana, nandritra io fiaraha-miasakafo maraina tamin’ny andro antoandro io. Azo lazaina fa niezaka nanao pi-maso tamin’ny mpanao gazety ny Filohampirenena nandritra io fotoana io, na ny marimarina kokoa, niezaka nanambitamby ny mpampita vaovao ny tenany, ny fotoana hoy izy no tsy azo anoharana fa tokony hisy hatrany ny fihaonana toy ny tamin’ny sabotsy iny.
Amin’ny ankapobeny, nisy ny fanontaniana voavaliny tsara, ao ireo nosafosafoiny fotsiny ny famaliana azy, ary ao koa aza ny tsy voavaly na ny niniany tsy novaliana, tsapa koa fa mbola ao amin’ity filoha ity ihany ilay fampiesonana araka ny fitenin-jatovo azy. Lazainy fa tsy misy voasaringotra amin’ny resaka olan’ny harena ankibon’ny tany ny fianakaviany : na ny rahalahiny izany, na ny zanany. Vao tsy ela akory anefa izay tany Moramanga, voasaringotra amin’ny fidirana amin’ny toerana tsy tokony hidirana hitrandrahana, amin’ny valan-javaboahary arovana ny rahalahin’ity Filoha ity, mahafantatra izany tsara ireo vahoaka, ny mpitandro filaminana ary ny mpiaro ny tontolo iainana amin’iny faritry ny Bezanozano iny.
Momba ny fanokafana ny haino aman-jery MBS, nilaza ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa raha ara-dalàna izany efa tokony hisokatra. Midika izany fa tsy ara-dalàna ity haino aman-jery tsy miankina ity aminy. Efa any amin’ny fitsarana ny raharaha, ny fitsarana ihany no afaka hiteny na ara-dalàna, na tsy ara-dalàna ny MBS fa tsy ny filoha velively, midika iny fanambarany ny faran’ny herinandro teo iny fa misy tsindry mivantana avy eny aminy eny Iavoloha mihitsy ny tsy fanokafana ity haino aman-jery MBS ity. Izany dia anisan’ny antony ilazana fa matahotra ny Filoha Marc Ravalomanana tokoa izy, na niteny aza ny tenany fa tsy matahotra: na ny Filoha Marc Ravalomanana, na ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Momba ny radio Mada izay ampiasain’ny olona hafa mihitsy amin’izao fotoana izao ny onjampeony dia tsy voavaliny na nosafosafoiny fotsiny ny famaliana azy, tantara mbola hitohy io fangalaran’ny sasany ny onjampeon’olona io.
Mikasika ny lalampanorenana dia nambarany fa tsy fanovana tanteraka no tokony hatao fa fanitsiana, anisan’izany hoy izy ny fanaovana ny fifidianana filohampirenena ho avy ao anatin’ny 1 volana satria izay no voalaza ao amin’ny lalàna fototra, izay nosoritany fa tsy ho vita ka mila hahitsy io andininy io. Ny dikany anefa dia fanitarana hatrany ny fotoam-piasany no ketrehany araka ny fahitan’ny maro azy, programan’asa tsy vitany nandritra izay 3 taona sy tapany izay, tsy ho vitany ao anatin’ny fotoam-piasany kely sisa io intsony.
Tsy maharesy lahatra ny maro ny mpomba ny fitondrana sy ny seraserany
Maromaro ny fihetsika nataon’ny mpitondra fanjakana tato ho ato izay, azo tsorina hoe te hampiseho amin’ny vahoaka fa mandray andraikitra . Niainga amin’ny fanoloana Praiministra ; nandalo tamin’ny fanesorana Ministra ; teo koa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony any anivon’ny Ministera samihafa ; lazaina koa fa ho avy ny fanendrena Ambasadaoro . Dia tonga indray ity ny finiavana avy amin’ny Filohampirenena hikitika ny Lalampanorenana izay tsy ny andininy iray manontolo fa andininy vitsivitsy . Tsy mametraka ady hevitra momba izay fahefana sy zon’ny Filohampirenena ny rehetra amin’ny fikasana izay eritreretiny satria voalazan’ny lalàna rahateo izany saingy tsy omena tsiny kosa ny olona raha miahiahy satria vanim-potoana manakaiky fifidianana no handraisana fanapahan-kevitra goavana .
Miezaka manazava ny antony hikitihana Lalampanorenana ny etamazaoro politikan’ny fitondrana sy ny mpanao serasera miaraka amin’izany fitondram-panjakana izany, fa tsy maharesy lahatra ny olona hatreto. Ny Filohampirenena aza dia niditra antsehatra mihitsy tamin’ny fampiantsoana mpanao gazety tamin’ny Sabotsy teo . Matoa miteraka fanontaniana etsy sy eroa ny fikasan’ny Filohampirenena hikitika Lalampanorenana dia efa tsapa sahady fa misy tsy fitokisan’ny vahoaka ao . Betsaka mantsy izay fandraisana fanapahan-kevitra sy fampanantenana nataon’ity fitondrana ity izay saingy ho tapitra ihany ity ny fotoam-piasan’ny filoha kanefa ny fahantrana mihalalina hatrany ka tsy mahagaga raha maro no mimenomenona . Tsy maharesy lahatra ny fanazavan’ny filoha fa hitsinjovana fitoniana no antony hikitihana ny Lalampanorenanana satria tsy vaovao amin’ny Malagasy izany tsy fitoniana izany satria iainany isan’andro . Miteraka inona amin’ny fiainan’ny Malagasy ny fanapahan-kevitra hikitika Lalampanorenana manakaiky fifidianana Filohampirenena ?
Tsapa fa sahirana ity fitondrana ity ka lasa manao zavatra tsy tena voadinika tsara . Fa na inona na inona fanapahan-kevitra ho raisin’ny fitondrana tarihan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tsy mampiova tampoka ny fahasahiranan’ny Malagasy izany ; ny olona efa nilaza ny firotsahany ho fidiana amin’izany fifidianana izany koa dia vonona hatrany raha tsy hiresaka afatsy ny Filoha Nasionalin’ny Tim, Marc Ravalomanana isika na hikitika na tsy hikitika ny Lalampanorenana ny mpitondra ankehitriny, sa ahoana hoy ianao ?
Olona mpifamofo matin’ny pesta
Isan’ny faritra tena mbola ahitana soritr’aretina Pesta isan-taona i Vakinankaratra. Azo lazaina fa isan’ny tsy mahafongana ity aretina ity ny fisian’ny famadihana satria misy amin’ireo maty no halevin’ny fianakaviana am-pasan-drazana ihany rehefa maty ka tsy voatilin’ny mpitsabo ary dia mipoitra hatrany ny aretina rehefa misokatra ny fasana. Amin’izao fotoana dia voizina mafy fa voafehy io aretina io eto Vakinankaratra ka miezaka ny manentana ny olona amin’ny ady amin’ny pesta ny mpitondra eto Vakinankaratra. Raha ny fantatra dia olona 3 no matin’ity aretina ity taty an-toerana ary olona 4 hafa kosa efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy tany Faratsiho ihany izay nitrangan’izany. Mandeha ny fanentanana, ka ho an’ireo izay mahita trangana aretina hafahafa dia aoka hanatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana na ihany koa hampandre ny manam-pahefana.
Fa mikasika ity olona matin’ny pesta ity ihany dia re araka ny angom-baovao fa nisy tamin’ireo olona matin’ny pesta ireo no mpifamofo ary efa vita fomba malagasy no niara-nindaosin’ny fahafatesana avokoa. Raha tsiahivina dia nisy ilay lehilahy iray maty ny faramparan’ny volana aogositra lasa iny, tany Faratsiho tany. Voalazan’ny loharanom-baovao fa vao avy nanao vodiondry ny vadiny razazalahy tao Faratsiho no lasa tany Toamasina. Nony tonga tany dia voalaza fa narary ranamana ary isan’ny nikarakara azy ilay fofombadiny, saingy namoy ny ainy ihany ilay zazalahy ary nalevina tany Andramasina. Nandritra ny fitiliana ny rà-ny no nahafantarana fa pesta no nahazo azy, raha ny angom-baovao ihany.
Rehefa voalevina razazalahy dia nody tany Faratsiho ilay zazavavy ary rehefa tonga tany dia voalaza ihany koa fa nanary indray ary nampidirina hopitaly avy hatrany, saingy ny harivan’ny nidirany hopitaly ihany dia nindaosin’ny fahafatesana ihany koa izy, ary voamarina fa nifindran’ilay pesta tamin’ny vadiny no nahafaty azy. Efa fantatra fa nisy ny fidinana tany ifotony tamin’ity raharaha ity ka voalaza fa olona miisa 8 no efa noahiana ho voan’ny Pesta hatreto, ka ny 4 tao Amparihimena ary ny 4 tao Ambaniandrefana raha ny fanazavana avy tany an-toerana, ka efa voatsabo sy narahi-maso akaiky ireto olona ireto amin’izao fotoana. Amin’izao fotoana dia efa atao dridran-gilo ny filazana fa voafehy io aretina io saingy ilàna fahamailoana ihany satria mety ho fandaminan-tsaina ny malagasy ihany izany fa mila mitandrina ny tsirairay.
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Ambatondrazaka, Cotrim peste, CUA Omavat, Faratsiho peste, Fjkm Miarinarivo, Marc Ravalomanana, Rajaonarimampianina, sambo Norbert, Sefafi, Tim Madagascar. Ajoutez ce permalien à vos favoris.